Saddex siyaabood oo fudud oo aad ku bilaabi karto kormeerka astaantaada internetka | Martech Zone
Saddex siyaabood oo sahlan oo aad ku bilaabi karto kormeerka magacaaga internetka
Jimco, Janaayo 22, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Michael Reynolds
Haddii aad lasocotay isbeddelada warbaahinta bulshada gebi ahaanba, waxaad u badan tahay inaad maqashay wax badan oo ku saabsan ka mid noqoshada "wada hadalka" iyo sida looga qayb qaato. Waxa kale oo laga yaabaa inaad maqashay digniinta: "dadku waxay ka hadlayaan shirkaddaada haddii aad joogto iyo in kale". Tani gabi ahaanba waa run waana sabab weyn oo loogu boodo warbaahinta bulshada loona bilaabo kaqeybgalka. Haddii aad qayb ka tahay wadahadalka, waad ka jawaabi kartaa su'aalaha, waad xakamayn kartaa waxyeelada, waxaadna siin kartaa adeeg macmiil oo wanaagsan.
Marka sideen ula soconaa wada hadalada oo dhan? Halkan waxaa ah seddex shay oo aad dejin kartid daqiiqado gudahood si aad u bilowdo la socodka wadahadalka ku saabsan astaantaada.
Ka faa'iidayso Digniinaha Google Tani waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah qalabka ugu fudud laakiin ugu wax ku oolka badan ee diyaar u ah la socodka calaamadda. Digniinta Google waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto digniino gaar ah oo keyword ah oo kuu soo diri doona adiga mar kasta oo ay ka soo muuqdaan shabakadda ay ku jiraan ereyadaas muhiimka ah.
Maaddaama magacayga shirkaddu tahay SpinWeb, waxaan hayaa heegan loo sameeyay si aan ula socdo erayga "SpinWeb", oo macnaheedu yahay waxaan helayaa emayl mar kasta oo shirkaddayda lagu xuso websaydhka.
Samee ogeysiisyo ku saabsan TweetBeep. TweetBeep waa adeeg bilaash ah (ilaa 10 digniino) oo kormeera wada hadalka Twitter ka dibna kuu soo diro emayl ay ku qoran yihiin dhamaan fariimaha ay ku jiraan eraygaaga muhiimka ah. Feejignaan loo diyaariyey "SpinWeb" ayaa maalin kasta ii soo dirta (ama saacad kasta, haddii aan doorbido) iimayl ay ku jiraan dhammaan qoraallada ka hadlaya shirkadayda.
Tani waxay ii fududeyneysaa inaan si xulasho leh ugu boodbo sheekooyinka aniga xiisaha ii leh.
Skaan shabakadaha bulshada leh SocialMention. Adeegani wuxuu dabagal ku sameeyaa in ka badan 80 shabakadaha bulshada oo ah eraygaaga muhiimka ah, oo ay ku jiraan Twitter, Facebook, FriendFeed, Youtube, Digg, Google iwm.
Haddii aad raadineyso hab fudud oo aad ku bilaabi karto kormeerka astaanta adoo adeegsanaya warbaahinta bulshada, inaad daqiiqado kooban ku qaadato sameynta seddexdan qalab waa meel fiican oo laga bilaabi karo. Waxay otomaatig ka dhigi doontaa dadaalkaaga oo waxay kaa ilaalin doontaa waxa laga sheego shirkaddaada. Waxaad sidoo kale ogaan doontaa inay xoojinayso xiriiradaada khadka tooska ah maxaa yeelay waxaad awood u leedahay inaad si firfircoon uga qaybqaadato markasta oo qofna uu kaa hadlayo, taasina waa adeegga macaamiisha ee weyn.
Tags: kormeerka sumaddawargeysyada googlesocodkadigniinta bulshadatixraaca bulshadakormeerka bulshada
Gacaliyeyaasha Suuqyada Teknolojiyada: Jooji Suuqyada Suuqgeynaya Faa'iidooyinka
Iibsashada Dabeecadda Way Is Bedeshay, Shirkaduhuna Ma Beddelin
Jan 24, 2010 saacadu markay ahayd 2:48 PM
Farriin weyn, Michael!
Kormeerku waa isbeddelka warshadaha warbaahinta bulshada. Dhageysigu wuxuu ahaa tillaabada koowaad, laakiin hadda kuma filna. Ka qayb qaadashadu waa lama huraan. Waxay kuxirantahay waxa baahidaada kormeerida iyo kaqeybqaadashadu ay tahay, qalabka kor ku xusan ayaa shaqeyn kara, ama waxaad u baahan kartaa inaad aado xalka culus ee culus. Markaad fursad hesho, fadlan ka hubso aaladda Bulshooyinka Aragtida Biz360 - habka ugu wanaagsan ee lagula socdo, loo ogaado cidda ilaha ugu saameynta badan ee wadahadalladu yihiin, si aad u hawl gasho, oo xitaa aad ugu wakiilato hawlaha ka qaybgalka kuwa kale shirkaddaada (socialCRM) ). Xor ayaad u tahay inaad ii xoqdo wakhti kasta.
mogneva (at) biz360 (dhibic) com